कात्तिक ११, २०७३ बिहिवार ०६:५३:१७
हरेका प्रकारका तरकारीहरुमा बिभिन्न किसिमका पौष्टिकतत्वहरु पाइन्छन् । मौसमअनुसार तरकारीलाई सन्तुलन मात्रामा खान सकेमा रोगको सम्भावना निकै कम हुन्छ । गाढा पहेलो र हरिया तरकारीमा प्रशस्त मात्रामा क्यारोटिन पाइन्छ । क्यारोटि भिटामिन एको प्रारम्भिक स्वरुप हो । क्यारोटिन शरिर भ...
कात्तिक ११, २०७३ बिहिवार ०६:४२:१७
हाम्रो शरीरमा पाइनेमध्ये अधिकांश क्याल्सियम हड्डीमा पाइन्छ । यसले हड्डी मजबूत पार्छ । क्याल्सियमकै कारण मुटु, मांसपेशी, रगत तथा स्नायुकोषहरुले पनि शरीरमा स्वस्थ रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन् । यदि हामीले शरीरलाई चाहिने आवश्यक क्याल्सियम उपभोग गरिएन भने शरीरले हड्डीबाट क्याल्स...
असोज १९, २०७३ बुधवार १३:५२:००
जमरा भन्ने वित्तिकै धेरैले संम्झिन्छन्, लगाउने कुरा । तर, दशैमा टीकासँग लगाउने जमरा लगाउँन मात्रै होइन् खान पनि हुन्छ, त्यो पनि स्वास्थ्यको दृष्टिले धेरै फाइदाजनक पनि हुने तथ्य पुष्टि भएको छ । मकै, गहुँ, धान, जौलगायतका अन्न मिसाएको दशैको घटस्थापनाको दिन घरघरमा जमरा ...
गाँजर र करेलाका फाइदा
असोज १५, २०७३ आइतवार ०२:१४:००
गाँजर गाँजरमा उच्चमात्रामा बेटा क्यारोटिन पाइन्छ । यसका साथै भिटामिन ए, मिनरल्स र एन्टिअक्सिडेन्ट पनि पाइन्छ । यो आँखा, छाला, पाचन प्रणाली र दाँतका लागि लाभदायी हुन्छ । यसमा अत्यन्त न्युन मात्रामा क्यालोरी पाइन्छ भने चिल्लो पदार्थ शुन्य हुन्छ । गाँजर खानु आँखाको स्वास्थ्यक...
असोज १४, २०७३ शनिवार ०१:१७:००
गाढा हरियो रंगको तुलसी जस्तै स–साना पात हुने पुदिना वा पतिना प्रायः चटनी वा अचारको रुपमा खाने गरिएको वनस्पति हो । पुदिना नेपाल, भारत, चीन लगायतका देशहरूमा प्रायः पाइन्छ । बाह्ै महिना चिसो स्थान ठाउँमा भइरहने प्रायः गर्मीतिर फुल्ने गर्दछ । अचार, तरकारी आदिको...
अनारका १५ फाइदा
असोज १२, २०७३ बुधवार १३:५५:००
अनार स्वास्थ्यका दृष्टीले निकै लाभदायक फल मानिन्छ । अनार यौन समस्या, मुटु रोगदेखि क्यान्सरका लागि समेत राम्रो मानिन्छ । यस्ता छन् अनारका फाइदा : धमनीको रक्षा : अनारले शरिरमा कोलेस्ट्रको मात्रा घटाउँछ, मुटुका धमनीलाई बलियो र लचिलो बनाउँछ । पखला निको पार्छ : ताज...
गोलभेँडाका ११ फाइदा
असोज ९, २०७३ सोमवार ००:११:००
गोलभेँडाले खानालाई स्वादिलो त बनाउँछ नै, शरीरलाई स्वस्थ राख्न पनि मद्दत पु¥याउँछ । गोलभेँडाका केही गुण यस्ता छन्ः कपाल र छाला चम्काउँछ घामबाट आउने विकिरण, प्रदूषण आदिका कारण कपाल झर्ने, पातलो हुने, फुस्रो हुने र टुक्रिनेलगायत समस्या आउँछन् । साथै, छाला सुखा,...
यी फलफूलले बचाउँछ छाला चाउरी पर्नबाट
असोज ९, २०७३ आइतवार २३:२६:००
बृद्ध हुनु प्राकृतिक नियम हो । उमेर बढेसँगै अनुहारको छालापनि चाउरी पर्छ र तन्किन सुरु गर्छ । तर उमेर नपुग्दै छाला चाउरियो भने के गर्ने ? युवा अवस्थामा नै छाला चाउरी पर्न थाल्यो भने अनावश्यक र महंगो क्रिम र लोसनको सट्टा प्राकृतिक उपाय अपनाउनुपर्छ । यसका लागि फलफूलमा व...
प्याजले पन्छाउछ यी स्वास्थ्य समस्या
असोज ९, २०७३ आइतवार १५:०७:५८
प्याज तरकारी र सलाद मात्रै हो सोच्ने धेरैको बानी हुन्छ । कतिले यसको बास्ना पछिसम्म रहने र श्वास गन्हाउने भनेर प्याज खान मान्दैनन् । तर, प्याजको उपयोगीता औषधि भन्दा कम छैन । नियमित प्याज सेवनले उमेर मात्रै बढाउदैन, कतिपय रोगका लागि घरेलु औषधिको काम समेत गर्छ । ...
असोज ७, २०७३ शुक्रवार २१:२०:२६
दूधमा हुने प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन बी–२, बी–१२, ए, बि, डि सबै पनिरमा पाइन्छ । यसका साथै पनिर दाँतका लागि पनि लाभकारी हुने तथ्य पत्ता लागेको छ । पनिरमा पाइने खनिज, नुन, क्याल्सियम तथा फस्फोरस दाँतको इनामेलको रक्षा गर्छ । पनिरले हड्डीलाई मजब...
दहीका २० फाइदा
असोज ५, २०७३ बुधवार १३:५०:२३
अपच हट्छ दहीमा भुटेको जिरा पिसेर त्यसमा अलिकति नुन र मरिच हालेर बिहान खाएमा खाना राम्रोसँग पच्छ । टाउको दुखाइ हटाउँछ बिहान सूर्योदयसँगै टाउको दुखाइ बढ्दै जाने समस्या छ भने सूर्योदयअघि दहीसँग भात मुछेर खाने गरेमा टाउको दुखाइ कम हुन्छ । वजन घटाउँ...
असोज ३, २०७३ सोमवार २१:४७:३८
हामी फलफूल खान्छौँ र यसको बोक्रालाई काम नलाग्ने ठानेर मिल्काउँछौँ । तर, फलफूलको बोक्राबाट अनेक फाइदा लिन सकिन्छ । सुन्तला – सुन्तलाको बोक्रामा प्रशस्त पौष्टिक तत्व हुन्छ । सक्नुहुन्छ भने सुन्तलाको बोक्रा म¥याङम¥याङ चपाएर खानुस् । यसले मुटुसम्बन्धी र...
तपाईलाई थाहा नभएका स्याउका फाइदा
भदौ ३१, २०७३ शुक्रवार २०:३३:०८
तपाईं नियमित स्याउ खानुहुन्छ रु खानुहुन्न भने आजैदेखि खान सुरु गर्नुस् । किनकि दैनिक एउटा या दुईटा स्याउ खानेलाई मुटुको रोग लाग्ने सम्भावना कम हुने एक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । अंग्रेजीमा उखानै छ– एन एपल अ डे किप्स डक्टर अवे अर्थात् दिनमा एउटा स्याउ खानुभय...
भदौ २४, २०७३ शनिवार ००:४९:००
मध्य अमेरिकामा उत्पन्न भएको विश्वास गरिएको अम्बा नेपालमा प्राय : वर्षायामपछि पाइन्छ । अम्बा पोषणको ‘पावरहाउस’ हो, जसमा भिटामिन सी, लिसोपिन र एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । अद्धितीय स्वाद र फाइबरयुक्त यस फलले स्वास्थ्यमा अत्यधिक फाइदा हुन्छ भने छालाका...
दूध खानै पर्नै ८ कारण
भदौ २४, २०७३ शुक्रवार १२:५१:४५
१. हाड : दूध र दुग्धजन्य उत्पादन क्याल्सियम, फोस्फोरस, म्याग्नेसियम र प्रोटिनका स्रोत हुन्, जुन हड्डी वृद्धि र विकासका लागि अनिवार्य छन् । बाल्यकालदेखि नै आवश्यकमात्रामा दुध र दुग्धजन्य उत्पादन उपभोग गर्नाले हड्डी मजबूत हुनाको साथै भविष्यमा ओस्टियोपोरोसिसजस्ता रोगसंग लड्ने क्ष...
करेलाका १२ फाइदा
भदौ २३, २०७३ शुक्रवार ०२:४९:००
करेला एन्टिअक्सिडेन्ट र भिटामिनले भरिपूर्ण हुन्छ । करेलामा भिटामिन ए, भिटामिन बि १, भिटामिन बी २, भिटामिन सि, फाइबर, क्याल्सियम, पोटासियम, जिङक, फलाम, कपर तथा फोस्फोरस हुन्छ । स्वास्थ्यमा यसले गर्ने फाइदा निम्न छन् : १) श्वासप्रश्वास समस्यामा : ताजा करेला दम, रुघाखोकी...
भदौ १८, २०७३ शनिवार २३:२२:४४
काँच्चै खाएपनि, पकाएर खाएपनि, अचार बनाएर खाएपनि गाँजर नेपालीमाझ लोकप्रिय छ । यो जति लोकप्रिय छ, स्वास्थ्यका लागि उति नै लाभदायी पनि छ । गाँजर ५ हजार वर्षअघि फेला परेको विश्वास गरिएको छ । एउटा अचम्मको तथ्य के छ भने पहिले गाँजर अहिलेको जस्तो सुन्तला रंगको हुँद...
भदौ १८, २०७३ शनिवार १३:०६:४६
आधुनिक जीवनमा तनावको समस्या जताततै देख्न सकिन्छ । तनाव विभिन्न कारणले हुन सक्छन् । यसका समाधानका उपाय पनि छन् । यस्तो अवस्थामा काजुको नियमित सेवनले पनि तनाव कम गर्न सकिन्छ । यो भिटामिन बी को समृद्ध स्रोत हो, जसले शरीरको क्षमता बढाउँछ । काजुलाई मुड बनाउने खाद्यपदार्...
तुलसीका १६ फाइदा
भदौ १७, २०७३ शुक्रवार १९:३८:००
आयुर्वेदमा बिभिन्न रोगमा तुलसीको प्रयोगको प्रयोग र गुणलाई महत्व दिइएको पाइन्छ । प्राचीन चिकित्सा वैज्ञानिक महर्षि चरकले चरक संहितामा तुलसीको रोगनाशक गुणको बारेमा उल्लेख गरेका छन् । तुलसी पाँच प्रकारको भएको मानिन्छ । तैपनि रंगका आधारमा दुई थरीका हुन्छन् । श्याम तुलसी (ग...
भदौ १६, २०७३ शुक्रवार ०१:४६:००
अमला एक बहुगुणकारी फल हो । अमला खाँदा अमिलो र टर्रो भए पनि खाएको एकैछिनमा मुखमा मिठो स्वाद उत्पन्न हुन्छ । अमला अति स्वस्थकर फल हो । यी रोग र समस्यामा अमलाले फाइदा गर्छ । कब्जियत अमलाको सुकेको धुलोमा हर्रो र बर्रोको धुलो बराबर मिसाई एकदुई चम्चा सुत्ने ब...